Chii chinonzi SEM uye nei uchifanira kuchiita muEcommerce yako? | ECommerce nhau
Chii chinonzi SEM uye nei uchifanira kuchiita muEcommerce yako?
Yekutsvaga injini yekushambadzira, inozivikanwawo seSEM, chiitiko chekushambadzira chinosanganisira kushandiswa kwezvikwereti zvakabhadharwa kuti zvionekwe pamapeji enjini dzekutsvaga. Ndokunge, makambani kana vashambadzi, bhidha pamazwi akakosha ayo vashandisi veinjini dzekutsvaga tsvaga segoogle uye bing, ivo vaigona kupinda kana vachitsvaga zvimwe zvigadzirwa kana masevhisi.
Izvi zvinobvumira mutengesi kuratidza kushambadzira zvine chekuita nebhizinesi ravo mumhedzisiro yekutsvaga. Icho chikonzero nei zvichikurudzirwa kuita iyo SEM inodzidzira mubhizimusi reEcommerceIzvo zvine chekuita nenyaya yekuti ivo vanogadzira yakakura yakawanda mabhenefiti ayo anoenda kupfuura kungangodaro kutengesa.
Aya ma ads anogona kushandiswa mune akasiyana mafomati; mamwe mavara-based ads, nepo mamwe ari ekushambadza anoonekwa, zvichibva mune ino kesi, pane zvigadzirwa zvinobvumidza mutengi, tarisa ruzivo rwakakosha senge mutengo kana ongororo.
Zvichida iyo chinonyanya kukosha chekutsvaga injini yekutsvaga, ndeyekuti inopa mabhizimusi eEcommerce nevashambadzi mune zvakawandisa, mukana wekuisa kushambadza kwavo mumaziso evatengi avo vanoda kutenga panguva chaiyo yavakagadzirira nzira yekutenga.
Izvo zvakakodzera kutaura kuti pasina imwe nzira yekushambadzira izvi zvinogona kuitwa, saka, iyo SEM inoshanda kwazvo uye inopa nzira ine simba yekuvaka bhizinesi reEcommerce. Asi kuti ubudirire neSEM yekumisikidza, zvakakosha kusarudza mazwi akakodzera.
As the vashandisi vanopinda macaration sechikamu chemibvunzo yekutsvaga mumajini ekutsvagaAya mazwi anova hwaro hweyese yekutsvaga injini yekushambadzira.
Izvi zvinodawo kuzivisa iyo mazwi akakosha anoenderana nebhizinesi reEcommerce uye izvo zvinogona vatengi vanogona kushandisa kana vachitsvaga zvigadzirwa nemasevhisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » SEM » Chii chinonzi SEM uye nei uchifanira kuchiita muEcommerce yako?
Inzanga midhiya inogona kukanganisa bhizinesi rako?
Nei dhizaini inoteerera yakakosha kune ecommerce saiti?